သတင်း - PP foam board အတိုချုံးမိတ်ဆက်ခြင်း။
polypropylene (PP) foam board ဟုလည်းလူသိများသော PP foam board ကို ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် polypropylene (PP) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း၏သိပ်သည်းဆကို 0.10-0.70 g / cm3 တွင်ထိန်းချုပ်ထားပြီး အထူမှာ 1 mm-20 mm ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အထူးကောင်းမွန်သော အပူတည်ငြိမ်မှု (အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုအပူချိန်မှာ 120%) နှင့် မြင့်မားသောအပူချိန်အောက်တွင် ထုတ်ကုန်များ၏ အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု၊ သင့်လျော်ပြီး ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။
PP ရေမြှုပ်ဘုတ်အတွက် Ipsum Dolor
Foamed PP ၏အသုံးပြုမှုသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ အသေးမှ အကြီးအထိ သင်္ဘောထည်အထိ အသုံးချထားသည်။ Foamed PP သည် ထုပ်ပိုးမှု၊ မော်တော်ကား၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၊ အာကာသယာဉ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်မှုတို့ကြောင့် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
1. ဖောက်သည်သည် နမူနာအချက်အလက်များ (ကုမ္ပဏီအမည်၊ ဌာန၊ လက်ခံသူအမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်) ကို စာတိုက်မှ ပေးပို့ရမည်။
2. အသုံးပြုရန်နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့၏ အထူးလိုအပ်ချက်များ (မတူညီသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ နမူနာပေးပို့ခြင်းအတွက် မတူညီသောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ)
3. လိုအပ်သောပန်းကန်၏ အရေအတွက်၊ အမြှုတ်အချိုး၊ အရောင်၊ အထူ x အလျား x အကျယ်
နမူနာ နေ့ချင်းပြန် ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ဝယ်ယူသူမှ ကျခံစေရမည်။
နမူနာအများအပြားကို နမူနာအခကြေးငွေ ကောက်ခံပါမည်။
2012 ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ရှန်ဟိုင်းတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် CeMAT Asia တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Guangzhou တွင်ကျင်းပသည့် ceMAT Asia တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုတ်အဖွဲ့အား သုံးစွဲသူများပိုမိုသိရှိစေရန်အတွက် ပြပွဲတွင် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ပြသပါမည်။ ဒါကြောင့်tဟေး အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။.
2022 ခုနှစ် မတ်လ 8-10 ရက်၊ Shanghai New International EXPO Center Sourcing တွင် ကျင်းပသော Interfoam China 2022 တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ပါမည်။
Interfoam သည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိ ရေမြှုပ်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြပွဲဖြစ်သောကြောင့်၊ ရေမြှုပ်လုပ်ငန်းမှ ပညာရှင်များ လက်လွတ်မခံနိုင်သော နှစ်ပတ်လည် ခမ်းနားသော အစည်းအဝေးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တဲနံပါတ် သည် G10၊exhibition Hအားလုံး e4 ဖြစ်ပါတယ်။.